Catalog: Holtop Modular Mhepo Yakatonhora Chiller (Heat Pump)
Holtop Mhepo Yakatonhora Modular Chiller vari vedu ichangoburwa chigadzirwa maererano ne pamusoro Makumi makumi maviri emakore ekutsvagisa nekuvandudza, tekinoroji kuunganidzwa uye ruzivo rwekugadzira izvo zvakatibatsira kukura chillers ine yakatsiga & yakavimbika kuita, yakavandudzwa kwazvo evaporator & condenser kupisa kutamisa kugona. Neiyi nzira ndicho chakanakisa sarudzo yekuchengetedza simba, kuchengetedza nharaunda uye kuzadzikisa mweya wakasununguka wemamiriro ekunze.
Holtop Mhepo Yakatonhora Modular Chiller shandisa mweya senzvimbo inotonhorera uye mvura yemufiriji senzvimbo inotonhorera yepakati yemamiriro ekugadzirisa mhepo. Ichi chigadzirwa chakateedzana chine mhando dzakasiyana dzeanotsanangurwa kutonhodza kugona kubva65 ku 130 kW uye kudziyisa kugona kubva 71 ku 141 kW. Inogona kuzadzikisa chinodikanwa pamitoro yakasiyana neFCU uye Yakasanganiswa mhando AHU's etc. Terminal michina ine akasiyana epakati mweya-kutonhodza masisitimu ayo anogona kusangana neichi chivakwa kutonhora zvinodiwa. Masunitsi ane zvakanakira komputa dhizaini, kushanda kwakanyanya, ruzha rwakaderera uye hupenyu hwakareba, mashandiro akanaka, etc.Inogona kupa ese marudzi epakati epakati yemhepo mamiriro uye maitiro nemvura inotonhora. Holtop Modular Mhepo Yakatonhora Chiller inogona inoshandiswa zvakanyanya mu hotels, hospitals, skusvetuka mzvese, office buildings, cinemas, mindasitiri, oil & chemical industry, mkugadzira industry, electronics industry, electric magetsi zviteshi.
1. Dziviriro Yakabatana:Kugadzira anopfuura gumi kuchengetedza mabasa ekudzivirira, ayo anogona kuona chiller unit uye nesisitimu mashandiro mune ese-anotenderera dziviriro. Iyo yuniti inogona kudzorwa kuburikidza neakawanda-musiyano yekutarisa system kuona iyo unit ine yakagadzikana uye inoshanda mashandiro.
2.Wide Kupisa Range reKushandisa, Kunetseka-kusununguka kweOperation:Chiller unit inokodzera mashandiro muhupamhi hwekunze tembiricha renji, kubva -20 ° C ~ 48 ° C.
3. Chiller Chikamu Chekushandisa Kana Chine Mhosva: Yuniti imwechete yakagadzirirwa neakawandisa compressors. Kana imwe yeanomanikidza ikakundikana, mamwe ese ma compressor muchirongwa anogona achiri kushanda zvakajairika pasina kukanganisa mashandiro ehurongwa hwese.
4.Modular Mubatanidzwa: Iyo chiller inotora modular musanganiswa dhizaini uye haidi kuisa tenzi kana sub-tenzi unit. Musanganiswa wega wega unokwanisa kubatanidza huwandu hwemasuniti gumi nematanhatu, kunyangwe iwo akagadzirwa akasiyana mamodheru, kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvezvivakwa zvakasiyana.
5. Nhanho Kutanga: Kutanga mauniti ese mumatanho, kuitira kudzikisa yekutanga ikozvino, kudzikisa kushamisika kune grid remagetsi, uye kudzivirira kukanganisa kukanganisa kweimwe michina yemagetsi.
6.Flexible Chikumbiro: Investment: Wedzera mamwe mauniti mukubatanidza chero nguva, iri nyore kune akawanda matanho ekudyara. Kutakura: Huwandu hweyuniti yega yega hwakaumbana, hunogona kutakurwa zvakasiyana, haudi crane panzvimbo yeprojekiti, inogona kuchengetedza mutengo wekufambisa. Kuiswa: Hazvidi imba yemuchina kana yakanyorova sisitimu yemvura, chete kumwe kunemhepo yakanaka yekufefetera. Iwo mapaipi emvura akagadzirwa padivi yeyuniti, iyo inogona kuve nyore kune yakatonhora mvura kubatana uye chengetedza yekumisikidza nzvimbo. Sisitimu: Pamvura inotenderera sisitimu, kunze kwekushandiswa kweyakajairika system, zvinosarudzika kushandisa pombi yekutanga ine inoyerera kuyerera system, uye inowirirana nekumhanyisa kumhanyisa kabhodhi sarudzo kusarudza.
7.Smart Defrosting Sisitimu: Nekunzwa neakawanda-akasiyana masisitimu sisitimu kuti ave nemutongo wakarurama pamamiriro ezvinhu echando, iyo chiller pachayo inogona kukwanisa kusarudza yakanakisa nguva yekupinda kana kubuda kubuda, kudzivirira kusagadzikana kwakaringana kana pamusoro pekudzora. Mune duplex system, iwo mauniti anogona kuwana imwe nzira yekudzora. Kana uchidziisa pasi peakanyanya-tembiricha mamiriro, kumisikidza manual defrosting yekuita zvirinani.
8. Njere PLC Kudzora Sisitimu: Iyo PLC yekudzvanya sisitimu inosanganisa iko kuve nyore uye kurerukirwa kweiyo wired yekudzivirira system uye zvakanakira zvepakati boka rekutonga system kuti uwane chiller boka repakati kutonga. Imwe PLC yekudzora sisitimu inogona kubata 1 kusvika kumasere mapoka. Boka rega rega rinogona kudzora 1 kusvika 16 zvidimbu zve modular chillers. Iyo sisitimu inogona kudzora inosvika 128 modular chillers. Iyo yekudzvanya sisitimu zvakare inonunura akasiyana maficha senge boka modhi switching, tembiricha kugadzirisa, on / off kudzora, nezvimwe kutora akawanda mafomu.
9. Mahara Kuwana Kwekuvaka Yekushandisa System: Standard RS485 yekuvaka kutaurirana interface inouya neakavhurika mukana kune yakajairwa ModBus yekutaurirana protocol. Iyo chishandiso inogona kubatanidzwa nyore nyore kune yekuvaka control system (BAS) yepakati kudzora, zviri nyore kuwana zvine hungwaru kudzora, kudzivirira zvisina basa simba dongo, uye chengetedza mweya-kutonhodza mashandiro ekushandisa.
Model / Rondedzero HFW-65HA1 WDC-65HA1-L HFW-130HA
Chaizvoizvo tembiricha mhando Yakadzika-tembiricha mhando Chaizvoizvo tembiricha mhando Yakadzika-tembiricha mhando
Chezita kutonhora chinzvimbo (KW) 65 63 130 130
Chezita kudziyisa chinzvimbo (KW) 71 71 142 141
Kutonhora Rated zvachose chiyamuro simba (KW) 19.5 18.7 39 37.7
Kuchenesa Rated zvachose chiyamuro simba (KW) 21 19.5 42 38.8
Zita rezita-kupisa kwekutonhora kugona (KW) / 52 / 100
Yakazara yezita remhepo inotonhora-yekupisa yekuisa simba (KW) / 18.6 / 37
Zvipenga zvikamu Yemagetsi yekuwedzera vharuvhu
Compressor Type Hermetic mupumburu
Feni Type Axial yakaderera ruzha fan
Simba (kw) 0.9 * 2 1.5 * 2
Mhepo inopisa kupisa Mhepo (m³ / h) 14000 * 2 19500 * 2
Type Yakakwira-inoshanda yakanyatsogadziriswa kupisa kupisa
Mvura inopisa inopisa Zita remvura kuyerera (m³ / h) 11.5 11.5 22.5 22.5
Type Yakakwira-inoshanda goko & chubhu kupisa exchanger
Kumanikidza kwemvura kudonha (kPa) 30 40
Mvura inopinda / nzira yekubatanidza pombi DN50 DN65
Kukura W * H * D (mm) 1810 * 960 * 2350 2011 * 1100 * 2300
Kurema kweNet (kg) 580 600 1000 1050
Pashure: Rooftop Yakavharwa Mhepo Inodzora
Zvadaro: Holtop DC Inverter DX Mhepo Inobata Chikamu
Mhepo Chiller Unit Sisitimu
Mhepo Yakatonhora Chiller System
Chilled Mvura Yuniti Sisitimu
Modular Mhepo Yakatonhora Chiller System
Modular Chiller Sisitimu
LHVE Series Permanent Magnet Synchronous Freque ...
Mvura-yakanyorova Screw Chiller